Riyadii dhakhtarnimada ee hooyadeed ay dhameystiri wayday ayay rumeysay | Salaan Media
Riyadii dhakhtarnimada ee hooyadeed ay dhameystiri wayday ayay rumeysay
September 13, 2019 | Published by: Hamse
Image captionDr Maryan Maxamuud Cabdi
Dr Maryan Maxamuud Cabdi ayaa dhawaan Dr noqotay oo ka qallin jabisay jaamacadda St. Paul’s Hospital Millennium Medical College ee magaalada Addis Ababa ku taalla.
Arrintaas ayaa farxad galisay ka dib markii ay dhamaysay lix sano oo ay jaamacadda dhiganaysay.
Inkastoo qalinjabintu ay xilli farxadeed u tahay ardayda oo dhan, haddana wuxuu Dr Maryan u ahaa mid ugu suntay xasuus gaar ah sida ay BBC-da u sheegtay.
“Aad ayaan u farxay markii aan qalin jabiyay, sababtoo ah waxaan rumeeyay riyadii hooyaday iyo riyadaydii,” ayay tiri Dr Maryan oo dib u milicsanaysa xasuus hore.
Cilmibaaris: Faa’iidooyiinka caafimaad ee cabidda Bunka
Wiilkii badbaadiyay gudoomiyaha ONLF oo hadda dib ula kulmay
“Hooyaday waxay jeclayd in ay dakhtarad noqoto, markii ay dugsiga sare ku dhamaysay Muqdishana, waxay billawday in ay caafimaadka barato, markii ay sannadkii koobaad marayso ayayse dawladdii Soomaaliya duntay”.
Maryan hooyadeed ayaa markaas u hayaantay magaalada Jigjiga, umana aysan suurtagalin in ay waxbarashada sii wadato.
Maryan oo hamigii hooyadeed oo kale yeelatay
Dr Maryan ayaa iyada oo yar billawday in ay jeclaato dakhtarnimada, fasalka lixaad markii ay gaartayna sawir cad ayay ka haysatay waxa ay mustaqbalka doonayso.
“Macallimiintu marka ay dhahaan maxaad jeceshahay in aad noqoto, waxaan ugu jawaabi jiray dhakhtarad.” Ayay tiri Maryan.
Wakhtigaas Deegaanka Soomaalidu ma lahayn Jaamacad, in gabadh loo diro gobol kale si ay lix ama toddobo sano ay u soo barato dhakhtarnimo arrin waalid badan ku adag ayay hayd.
Ilaa haddana aad ayay Dhakhtarnimada ugu yar yihiin gabdhadha Soomaalida ah ee Deegaanka ku nool, sida uu BBC-da u sheegay Dr Yuusuf Maxamed Cali oo ah wasiirka Caafimaadka ee Dawlad Deegaanka Soomaalida.
“Wasaaradda caafimaadka ee Dawlad Deegaanka Soomaalida waxaa hadda u shaqaysa saddex dhakhtar oo dumar ah” ayuu yiri Dr Yuusuf.
Dr Maryan markii ay iskuulka dhamaysay waxay go’aansatay in ay hamigeedii ku dhaqaaqdo, dhakhtarnimana barato.
“Hooyo haddaad dakhtarad noqoto, riyadaada oo kali ah ma aadan rumayn ee anna riyadaydii ayaad rumaysay ayay i itiri hooyo.”
Hadalkaas ayaa dhiirigalin wayn u noqday qalbigeedana ka gu’iwaayay Maryan. Sidaas ayayna jaamacad uga billawday magaalada Addis Ababa.
BBC Soomaali ayaa ku dadaashay in ay waraysi la yeelato Dr Maryan hooyadeed balse way ka cudur daaratay.
Jaamacadda Jigjiga oo hadda dakhtarnimo lagu barto
Jaamacadda magaalada Jigjiga ayaa sannadihii u dambeeyay bixisa culuunta caafimaadka oo ay dakhtarnimo ka mid tahay, arrintaas ayaana abuurtay rajada laga qabo in gabdhuhu ay ku soo bataan dakhtarnimada.
“Markii aan waxbarashada billaabay dadka intooda badan dhiirigalin kama helin, 90% ayaan dhihi karaa” ayay tiri Dr Miryan.
“Waxay i dhihi jireen ma lix sano ayaad waxbarasho sii wadi, ma meel aan dhul Soomaali ahayn ayaad intaas ku maqnaan, iska guurso gabadh baad tahay ee, ayay i dhihi jireen, waalidkay iyo dad tiro yar ayaanse dhiiri galin ka heli jiray,”
“Adeerkay Aadan Cabdi Sheekh ayaana abaal wayn igu leh oo ardaynimada igu garab istaagay” ayay tiri Dr Maryan.
Maryan waxay u aragtaa in gabdhaha hadda iskuulka ku jira ay ka nasiib badan yihiin oo ay hadda deegaankooda Soomaalida ka heli karaan waxbarashada dhakhtarnimada.
Jaamacadda Jigjiga ayaana la filayaa in ay gacan ka gaysato in ay gabdhuhu dakhtarnimada bartaan, sida uu qabo Dr Yuusuf oo ah wasiirka caafimaadka ee deegaanka Soomaalida.
“Hooyooyin Soomaaliyeed ayay daweeyaan dhakhaatiir aan Soomaali ahayn, danta ayaana u gaysay” ayay tiri Dr Maryan.
Dr Saadaad Mukhtaar oo bartay caafimaadka guud haddana ku takhasusaya caafimaadka carruurta ayaa dawladda ka codsaday in ay il gaar ah ku fiiriso gabdhaha dhakhtarnimada barta.
“Si gabdhaha aan dhakhtarnimada ugu dhiirigalinno waa in aan garab istaagno kuwa muunada ah ee hawshaas ka soo dhalaalay” ayuu yiri Dr Saadaad.
Wasiirka waasaradda Caafimaadka ee Dawlad Deegaanka Soomaalida Dr Yuusuf Maxamed Cali ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka iyo bulshada Soomaalidaba looga baahan yahay in ay gacmaha is qabsadaan si sare loogu qaado gabdhaha Soomaalida ah ee dakhtarnimada barta.
Calanka Soomaaliya oo Jigjiga laga calmaday
Wiil kaalin muhiim ah u buuxiyay xulka qaranka Soomaaliya
“Marka ay gabdhuhu Dakhtarnimo bartaan iyaga ayaan dooransiinnaa meesha ay jecel yihiin in ay ka shaqeeyaan, magaalooyinka ayaan ku qornaa si aan u dhiirgalino, qalbigoodana u ilaalino.” ayuu intaas ku sii daray Dr Yuusuf.
Wasiirku wuxuu sheegay in gabdhuhu ay door wayn ka hayaan wasaaradda caafimaadka ayna aad ugu badan yihiin kalkaaliso nimada.
Markii deegaanku yeeshay kuuliyado caafimaad, dumarka kalkaalisanimada barta aad ayay u bateen, Jaamacadda Jigjigana sidaas oo kale ayaan Dakhaatiir badan uga filaynaa ayuu intaas ku sii daray. Dr Yuusuf.